IMigomo ye-Olympic Triple Jump and Judging
Imithetho Yemiqulu Yee-Olimpiki
by UMike Rosenbaum
Ukugweba kunye nezikhokelo Umzobo kwiMbali yeOlimpiki
Igama lokuqala lokuqaqa eli- triple , "hop, isinyathelo, kwaye uyagxuma," ichaza ngokuchanekileyo le mcimbi we-Olimpiki. Amajumpu kufuneka athabathe amanqaku awo ngokuchanekileyo kuzo zonke izigaba ezintathu zokungena ukuze uphumelele. Basebenzisa ukudibanisa kwesantya kunye namandla, ngokusebenza ngokuqhubekayo kunye nobuchule obuvakalayo. Kodwa akukho mnandi ngaphezu komzala wakhe owaziwayo, ukuxuma okude.
I-American James Connolly yaba ngumkhosi wokuqala weeMidlalo zeOlimpiki zanamhlanje xa ephumelele ukuqhuma kathathu ngo-1896.
Esi siganeko sasilawulwa ngabantu baseMpuma baseYurophu nge-60s kunye ne-70 kodwa sele ibuye ibuye ibuye ibuye ibe yimeko ye-Olimpiki.
Indawo yokuLawula kunye nemiGaqo
Umzila ubuncinane ubunzima beemitha ezingama-40. Abakhuphiswano banokubeka amanqaku amaninzi kumjelo.
Amajumpu aphuma kwiqonga elithi "hop" kunye nomhlaba emlenzeni wokuthatha. Bathi bathathe isinyathelo esinye kwenye inyawo (isigaba sinyathelo), kwaye gxuma. Ngaphandle koko, imithetho yokuqhayisa kathathu iyafana naleyo yexuma elide.
Iipompo zilinganiswa ukusuka kumpembelelo osondeleyo owenziwe emgodini wokuhlaselwa nayiphi na inxalenye yomzimba wejumper.
Isizwe ngasinye sivunyelwe ukukhuphisana kwamathathu. Ukhuphiswano lwe-Olimpiki luquka ujikelezo olulungeleyo, apho bonke abathungayo abaphumeza imilinganiselo yokumisela kuqala baya kuqhubeka ekupheleni. Iziphumo zokuphumelela aziqhubeki ekugqibeleni.
Umntu ngamnye wokugqibela uthabatha ezintathu izimpembezo , ngoko i-jumpers eziphezulu ezisibhozo zifumana eminye imizamo emithathu.
Umntu omde kakhulu ongagxuma ngexesha lokugqibela.
IJumpers ezintlanu zenza iRekodi ye-Jump Record in 1968 kwimidlalo yeOlimpiki
Ingxelo yehlabathi yamadoda ngamamitha angama-55, i-10 1/2 intshi (17.03 yamitha) ithatha ukubetha ngo-1968 njengabaqhubi abaphezulu abahlanu bachitha bonke amanqaku amandulo. I-medual medal winner u-Guiseppe weNtlanga waseItaly wabeka ithoni ngelixa efanelekileyo ngokulingana no-56 1/2 intshi.
Iintlanga zaza zahamba ngamamitha angama-6 intshi ezintandathu kwijikelezo lokuqala lokugqibela. UViktor Saneyev wase-USSR waphuma ngeentlanga ezidlulileyo kwiintlanga ezingama-56 kwi-6 1/2 intshi kumjikelezo wesithathu. I-Nelson Prudenco yaseBrazil yaxhuma u-56-8 kwinqanaba lesihlanu ukuba iholele, kodwa kwafuneka ihlale isilivere xa i-Saneyev yokugqibela igxuma yayingama-intshi ayi-3/4 intshi. UAmerican Arthur Walker (amamitha ama-2 intshi) kunye no-Nikolai Dudkin (ama-56 intshi 1 intshi) yeSoviet Union bawabetha iirekhodi zehlabathi zangaphambili kodwa bebeka isine nesihlanu, ngokulandelana.
Impikiswano yokuGweba kweSahluko seThathu ngo-1980 iMidlalo yeOlimpiki
Ukuqwalasela iingxabano akuqhelekanga kwimidlalo ye-Olimpiki njengebhokisi, i-gymnastics kunye ne-skating skating, kodwa abazange badla ngokuthintela iziganeko zentambo kunye neendawo. Ngo-1980, ke, abantu abaninzi baseNtshona babememeza ngokuphathelele ukugweba ukuxuma kathathu ngexesha leMidlalo yeMoscow. ISoviet Union ithathe iindondo zegolide neesiliva kwimeko apho, eyadlalwa nguJaak Uudmae kunye nokuxuma kwamamitha angama-56, i-11 1/4 intshi (17.35 metres).
Noko ke, ababengabambisani nabakwa-USSR, u-Joao de Oliveira waseBrazil no-Australia wase-Australia, u-Ian Campbell, batyholwa ngamatye angama-9 kwiimvavanyo zabo ezili-12. Kwesinye isihlandlo, uCampbell wamangalelwa ngokukhupha umlenze wakhe wokuhamba ngexesha lesibini, okanye "isinyathelo" sesiganeko.
Ngoxa wayekrokraza, umgodi wawukhishwe, utshabalalise naluphi na ubungqina. I-record holder yomhlaba kwii-58 kwii-8 1/2 intshi intshi, u-de Oliveira wagqiba okwesithathu eMoscow (ama-56 ii-intshi ezintandathu) ngelixa iCampbell ibeka isihlanu (54 ii-10 1/14 intshi).
Ukudlala njani umdlalo weBingo Bango Bongo Golf
Isikhokelo sokuqala kwiTable Tennis
Indlela yokwenza iqela leBhodi labaThoba abahlanu
Ngaba i-9-Hole Golf Scores okanye Incomplete Izilungelelwano eziKulungele ukuPhathwa kweziPhene?
Imvelaphi kunye nokusetyenziswa kwebhokisi leTe
I-Top Route Mapping Websites
Ezemidlalo zasebusika kunye neChalori Ukuvutha
Ukuphinda usetyenzise kwakhona kunye nokubuyisela kwakhona kwakhona: Iimeko ezinokubakho kwiiThubhu ezindala kunye namaTire
IiNkqubo zoKwenziwa kweeNkathi zeHlabathi kunye neMikhonkco yeeStater Skaters
Indlela yokudibanisa "Abolir" (ukuchithwa)
Ukudibanisa noMninimkhulu we-Raguel, i-Angel of Justice kunye noHarmony
Amazwe aseBuddhist ahlanzekileyo
Ukutya okunempilo ngokuchasene neSicwangciso seSifundo seSondlo esingenampilo
10 Amazwi ngoGustav Mahler
Izinyoka zeNaga eBuddhism
Masigcine Yinyani NgeeMnandi zeHGTV Memes
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: iSedersi
I-Tlatelolco - I-Aztec yaseTenochtitlan yoDade City eMexico
Ulwazi malunga noKwazi